REENOEMANN: American Idol 2011 season
Posted by Ree Noe Mann at 1:48:00 AM
ထူးထူးခြားခြား တင်ဆက်တဲ့အခါကျရင်လည်း လင့်လေး ဝေမျှပါအုံး ကျနော်လည်း တူတူစောင့်ကြည့်နေမှာမိူု့ ကျေးဇူးး ။ ဒိုင်တွေ အားလုံးထဲမှာ Simon ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ ။
ဆိုင်မွန်မပါတော့ ကြည့်ရမှာ သိပ်တောင်အားမရှိဘူး။ ပေါ်လာ၊ ဆိုင်မွန်နဲ့ ရန်ဒီ သုံးယောက်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။
ဒီနိုင်ငံမှာလည်း အမေရိကန်အိုင်ဒိုးလ်ကို အတုခိုးပြီး လုပ်တဲ့ အိုင်ဒိုးလ် ရှိတယ်။ ရို့စ်တော့ သိပ်မကြည့်ဖြစ်ဘူး။ စာလာဖတ်သွားပါတယ် ကိုရီနိုမာန်။
ဟုတ်တယ် ဆိုင်မွန်မပါတော့ ကြည့်ရတာတောင် သိပ် အားရမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုင်မွန်က ပြောတာ အကဲဖြတ်တာ ခပ်တည်တည်ပဲ ပြတ်ပြတ်ပြောတယ်. ရန်ဒီကိုလဲ ကြိုက်တယ်. အရင် ဒိုင်အဖွဲ့ဟောင်းသုံးယောက်ကိုပဲ မျက်စိထဲမြင်နေရော